प्रम देउवाको सम्पत्तिमा भ्रष्टाचारको गन्ध , जसको कुकुरले नै दैनिक ३ हजारको खाना खान्छ ! (भिडियाे)::mirmireonline.com
प्रम देउवाको सम्पत्तिमा भ्रष्टाचारको गन्ध , जसको कुकुरले नै दैनिक ३ हजारको खाना खान्छ ! (भिडियाे)
काठमाडौं, साउन २८ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी निकायमा रहेको बेला भ्रष्टाचार हुनसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएका छन् । ‘एन्टि करप्सन मुभमेन्ट नेपाल’ नामको संस्थाले हालै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै उनको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उक्त संस्थाले एक भिडियो मार्फत प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को अपहेलना गरेको र ऐन बिपरित कार्य गरेको भन्दै उनलाई जहिले पनि कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सकिने बताएको छ ।
भिडियोमा बोल्ने संस्थाका ति प्रतिनिधिले भनेका छन्, ‘नेताहरुसँग सम्बन्ध बढाएर देउवा पढ्नका लागि २०४४ सालमा बेलायत गएको कुरा उल्लेख गर्दै त्यसबेला सम्म पनि उनको साथमा सम्पत्ति निश्चित मात्रै रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार देउवा बेलायत छँदा ०४६ सालमा हप्ताको १ सय ३५ पाउण्ड तलव लिएर बिबिसीमा जागिर खाएका थिए । त्यस क्रममा उनी ५ पाउण्डको सस्तो मुल्यमा बिहान–बेलुका खाना खाएर एक रेष्टुरेण्टको सोफामा सुत्थे ।
संस्थाले भारतीय प्रधानमन्त्रीको उदाहरण दिँदै देउवाले अकुत सम्पत्ति कमाएको बताएको छ । जब की, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत सम्पत्ति छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति भने कति छ उनी आफैँलाई थाहा छैन । संस्थाका ति प्रतिनिधिले किटान साथ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्न नसके पनि उनले भ्रष्टाचार गरेको गन्ध आएको बताएका छन् । काठमाडौंमा उनको विलाशी जीवन हेर्ने हो भने सम्पत्ति सुद्धिकरण, अख्तियार र अन्य निकायले पनि उनको सम्पत्तिबारे समात्न सक्ने थुप्रै प्रमाण छन् ।
हनुमन्ते सफाइमा २० टन फोहोर संकलन, व्यक्तिको नाममा गरिएका खोला अब सार्वजनिक जग्गाका रुपमा फर्काइने
एक महिनादेखि जताततै फोहोरको डङ्गुर, अझै उठ्न सकेन काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर
डा. केसीको अनशन २२ औं दिनमाः नियमित उपचार गर्न अस्वीकार, सरकारी पक्ष भन्छ– स्वास्थ्य ठिक नभएसम्म वार्ता हुन्न